Myanmar Defence Weapons: MA-2 5.56mm Gun (KaPaSa)
အမ္ေအ-၂ ၅.၅၆မမက်ည္သံုး အေပါ့စားစက္ကေလး ျဖစ္သည္။
ေမၿမိဳ႕မိုး December 24, 2011 at 7:34 AM
အစ္ကိုေရ.. ဒီေကာင္ကို စက္ ကေလး လို႔ေခၚပါတယ္..။
စက္လတ္ ဆိုတာ..။ MG-42 ကိုေျပာတာပါအစ္ကို
whispering shadow October 12, 2012 at 4:47 AM
ဆုံ​လည်​သေ​နတ်​ကို​ကျ​တော့​ဘာခေါ်​မ​လဲ​အစ်ကို? မြန်မာ​လို​ဘယ်​လိုခေါ်​လဲ? gattling gun ကို​ပြော​တာ။ မီ​လီ​မီ​တာ​ကို​တော့​ထည့်​မ​ပြော​တာ့​ဘူး။
MM December 25, 2011 at 8:57 AM
whispering shadow October 12, 2012 at 4:52 AM
ဒီ​သေ​နတ်​တွေ​က အစ်​စ​ရေးလ်​နိုင်ငံ​ရဲ့ Galil Assault Rifle တွေ​ကို​ပြန်​လုပ်​ထား​တာ​မဟုတ်​လား? မြန်မာ​နိုင်ငံ​က​သူငယ်ချင်း​တ​ယောက်​ရဲ့​ပြော​ပြ​ချက်​အရ​ဆို​ရင် မြန်မာ​ပြည်​က quality ကို​ကောင်း⁠ကောင်း​မ​ထုတ်​တာ​ကြောင့်​ဒီ​ရိုင်​ဖယ်လ်​တွေ​ရဲ့ accuracy ဟာတော်တော်​ဆိုး​တယ်​ကြား​ပါ​တယ်။ သူ​ပစ်​ခဲ့​တာ​တည့်​တဲ့​ရိုင်​ဖယ်​က​တည့်​ပြီး​မ​တည့်​တာကျ​တော့​ဘယ်​လို​ပစ်​ပစ် ပစ်​မှတ်​ကို​မ​ထိ​ဘူး​ပြော​ပါ​တယ်။ ဘယ်​လို​သဘောရ​ပါ​သလဲ​ခင်ဗျာ?